Unchched: Fortune Hunter inorova iyo App Store | IPhone nhau
Unchched: Fortune Hunter inorova iyo App Store
Kana iwe uri mafeni eiyo Unchched saga, zvirokwazvo iyi nhau inokufarira uye inoita kuti ufare: yasvika kuApp Store Unchched: Fortune Hunter, zita ratinofanira kuperekedza Nathan Drake muma adventures ake. Nekuda kwekukanganisa kunonzwisisika kwemidziyo yemafoni, Unchched: Fortune Hunter haina kana nyaya yakanaka semitambo yemitambo, asi pachezvangu, izvi hazviratidzike senge zvakaipa kwandiri.
Iri zita rinosanganisa chiito uye chirahwe mune yekutanga adventure yakakwidziridzwa nhare mbozha. Semitambo yemitambo, isu tinodzora Nathan Drake uye isu tichafanirwa kugadzirisa mapuzzle kuitira kuti tifambe kuenda kumberi. Asi kungogadzirisa mapuzzle hakuzove kunonakidza kwazvo, saka isu tichafanirwawo kukunda zvipingamupinyi nemisungo muhuwandu hweanosvika matanhatu.
Yekutanga Unchched zita rinosvika paApp Store
Kunyangwe isu tisingakwanise kutaura kuti iwo magiraidhi nemanzwi easina Kuburwa: Fortune Hunter yakaipa, kana tikatarisa kuti vari sei mumitambo Dreamcast tinogona kufunga kuti pane yakawanda nzvimbo yekuvandudza. Dambudziko nderekuti, kunyangwe iyo iPhone 6s, iPhone SE uye ese maPad Pro aigona kutsigira zvirinani mifananidzo, dai mitambo yemhando yakadai yaigadzirwa paizove nevashandisi vazhinji vaisazokwanisa kuitamba nekuti vaive nechinhu chekare, uye izvi chinhu chisingafarire kana kune vanogadzira kana vashandisi.
Ini ndinofanira kubvuma kuti ini handisi mudhara mukuru wesaga (ndinofunga kune mamwe mavhidhiyo kupfuura kuita mune yekunyaradza vhezheni) Ini ndinonakidzwa nekutamba Unchched: Fortune Hunter. Mutambo uri muropa uye hauna yakaoma kudzora, saka tinogona kutamba chero nguva, chero kupi. Uye zvakare, ine sarudzo iyo inotibvumidza kuti tibatanidze kune PlayStation Network uye tiwane mibairo kubva kune Unchched 4. Sokunge izvo zvaive zvisina kukwana, mutambo Ndezvemahara, kunyangwe ichisanganisira kutenga kwakabatana kunozotibatsira kufambira mberi nekukurumidza kana tichida.
UNCHARTED: Fortune Hunter ™vakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Unchched: Fortune Hunter inorova iyo App Store